देवकी मल्ल भन्छिन्, मैले कुरा गर्दा तपाईँ नबोल्नुस् भन्दै थर्काए
निशान न्युज फाल्गुन २४, 2075
नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाको अपहरणमा परेकी बझाङ ‘ख’ बाट निर्वाचित सुदूरपश्चिम प्रदेशकी सांसद देवकी मल्ललाई केही समयपछि उनीहरुले रिहा गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा सांसद मल्लसँग गरिएको कुराकानी :
हाहाहा... खै त्यस्तो कुरा गर्नेलाई के जवाफ दिनू ? नाटक हो भन्न खोज्नेहरुले नै नाटक गर्न खोज्या हुन् कि ? नत्र मैले ४–५ घण्टा उकालो किन हिँड्नु पथ्र्यो ? ८ मार्चका लागि भनेर संसदको बैठक छोडेर म बझाङ आइराखेकी छु । अनि बिहान ५ बजे नै बाइकमा चढेर दुई–तीनवटा कार्यक्रम उद्घाटन गरेको छु । अनि ४–५ घण्टा उकालो चढेर विभिन्न टर्चर किन लिनु पर्थ्यो होला ? त्यस्ता प्रश्नहरुको जवाफ मसँग छैन । भन्नेहरुको त आफै कुन ग्रन्थीले भन्यो थाहा छैन हजुर ।
प्रहरीको टोली त्यहाँ पुगेको रहेछ । हामी माथि नै थियौँ । मलाई छाड्दै गर्दा उनीहरुले भने, ‘दुःख नमान्नू होला । तपाईँको दोष छैन । तपाईँको राज्य प्रतिको हो हाम्रो गुनासो । हाम्रो महिला नेता गिरफ्तार गरेको हुँदा प्रतिक्रिया दिन मात्रै खाजेको हो ।'
विथ्थडचिर गाँउपालिकाले आयोजना गरेको १०९ औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसमा मल्ललाई जानबाट रोक मात्रै लगाएको नेकपा समर्थक एक जना कार्यकर्ताले बताएका छन् । नाम नखुलाउने शर्तमा उनले बन्दु चन्दलाई प्रहरी हिरासतमा राखेर बाहिर नारी दिवस मनाउनु उचित नभएको भन्दै मल्ललाई रोकेको बताए ।
साभार : उज्यालो अनलाईन